Thread: ကျောင်းသုံး သင်ရိုးညွှန်းတမ်း
09-28-2012 09:06 PM
Location မြို့ငယ်လေးရဲ့ မိုင်ပေါင်းများစွာ
Posts 709	Thanks 1,185
Thanked 1,596 Times in 369 Posts
Rep Power9ဒီနေ့ MTZO ပြောလို့ MOST (http://www.most.gov.mm/) ကို မျက်စိလည်ပြီးရောက်သွားပါတယ်...။ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ကျောင်းစာအုပ်တွေ download လုပ်လို့ရတယ်ဆိုလို့ပါ...။ တကယ်လည်း ရပါတယ်။
B-Tech 2nd year course ကို အောက်က link မှာ ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်..။ subject အစုံနဲ့ sample question ဆိုတာပါ ပါတယ်..။
B.E course ကို အောက်က link မှာ ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်..။ subject အစုံနဲ့ sample question ဆိုတာပါ ပါတယ်..။
ကျန်တာတွေ subject အလိုက် ပေါင်းပြီးရင် ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါ့မယ်..။ quality ကတော့ သိပ်မကောင်းပါဖူး။ ဖြစ်နိုင်ရင် ဒါကို print ထုတ်မယ့်အစား မူရင်းစာအုပ်ကို အင်းဝ စာအုပ်တိုက်မှာ သွားဝယ်ဖို့ အားပေးချင်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်က တစ်သက်လုံး တစ်ချို့ subject တွေက ref လုပ်ဖို့လိုနေတာလေနော်..။
နောက် နားမလည်တာတစ်ခုက အောက်က image မှာပါ..။ တစ်ချိန်တည်းမှာ MTZO နဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ download ဆွဲနေတော့ MOST မှာ visitor က အနည်းဆုံး နှစ်ယောက်ရှိနေပါတယ်... ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံတကာက ကျောင်းတွေရဲ့ website မှာ ပုံမှန်ဝင်နေတဲ့ student တွေရှိနေပါတယ်။ အခုတော့ MOST မှာ ex-students နှစ်ယောက်တည်းပေါ့လေ..။ ပြီးတော့ သင်ရိုးစာအုပ်တွေ download ရလိုက်လို့ ပျော်ပါတယ်..။ ဒါပေမယ့် တစ်ဖက်မှာ တကယ်အသုံးပြုမယ့် ကျောင်းသားတွေသာဆို ပိုပျော်မယ်ထင်ပါတယ်..။ နောက် download အလွယ်တကူ ရနေတာ ကောင်းလား မကောင်းလား မသိဖူး။ အခြားနိုင်ငံက ကျောင်းတွေရော ဘယ်လိုလုပ်ကြလည်း မသိဖူး။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် hardcopy တွေက သယ်ရပြုရခက်ပါတယ်..။ softcopy ရတဲ့အတွက် လိုအပ်သူတွေ လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ လွယ်လင့်တကူ အသုံးချနိုင်မှာ သေချာပါတယ်..။ anyhow, ကိုယ် သင်ခဲ့တဲ့ ဘာသာရပ်ဆိုတော့ ဘယ် chapter, ဘယ် paragraph လဲဆိုတာ လူတိုင်းက မှတ်မိနေကြတယ် မဟုတ်လားလေ..။
အပေါ်က ပုံလေးကတော့ လူကို နည်းနည်း တွေဝေနေမိစေတယ်..။ Last edited by johnmoeeain; 09-28-2012 at 09:08 PM.
စကားမပီသေးတဲ့ အိပ်မက်သေးသေးလေး အလိုက်ပေးရဦးမယ်ဆိုရင်တောင် ပြန်လိုချင်သေးတော့....
Welcome from အိပ်မက်ဆိပ်ကမ်း & DESIGN IDEOLOGY Reply With Quote The Following7Users Say Thank You to johnmoeeain For This Useful Post:
AndrewSway, January Gal, Maung Thant Zin Oo, tunaungkyaw, William Paul, ကိုထွန်း, ကိုဖိုးဇော် 10-02-2012 07:12 PM
Rep Power9B-Tech 1st year course ကို အောက်က link မှာ ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်..။ subject အစုံနဲ့ sample question ဆိုတာပါ ပါတယ်..။
AGTI 2nd year course ကို အောက်က link မှာ ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်..။ subject အစုံနဲ့ sample question ဆိုတာပါ ပါတယ်..။
AGTI 1st year course ကို အောက်က link မှာ ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်..။ subject အစုံနဲ့ sample question ဆိုတာပါ ပါတယ်..။
အပေါ်က 4shared link မှာတော့ Course တစ်ခုချင်း Subject တစ်ခုချင်းဆီကို pdf တွေ combined လုပ်ထားပေးပါတယ်..။ connection မကောင်းလို့ upload တင်တုန်းက ဖိုင်တွေကို split လုပ်ခဲ့ပုံရပါတယ်...။
နောက်ပိုင်း အချိန်ရရင်တော့ course တစ်ခုချင်းဆီရဲ့ မူရင်း reference pdf တွေကို ရှာတင်ပေးပါ့မယ်..။ ကျောင်းတက်တုန်းက တစ်ချို့နေရာတွေမှာ equation တွေက ဘယ်ကနေ ဘယ်လိုရောက်လာမှန်းမသိလို့ တော်တော် ခေါင်းခြောက်ဖူးပါတယ်..။
နောက်ဆုံး မူရင်းစာအုပ်ထဲမှာ ပြန်ကြည့်မှပဲ နားလည်သွားတော့တယ်..။ တချို့ဆို ဘွဲ့ရပြီးမှာပဲ သိမြင် နားလည်လာရတာ ရှိသေးတယ်..။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်လို ကျောင်းသားတွေ စိတ်မကောင်း မဖြစ်ရအောင်ပေါ့လေ...။
သင်ရိုးတွေကတော့ အခုထိ မပြောင်းသေးဖူး ထင်ပါတယ်..။ နောင်တစ်ချိန် သင်ရိုးတွေမှာ Code of Practice တွေ၊ Software skill တွေ သင်ပေးနိုင်ရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ...။ ဒီအဆင့်တွေ မရောက်သေးရင်တောင်.. Theory ကို ကျေညက်အောင် လေ့လာနိုင်တဲ့ reference တွေ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်..။ ဒီလိုဆို နောင်တစ်ချိန် ကိုယ့်ဟာကိုယ် self-study လုပ်တဲ့အချိန် basic theory တွေထဲ တ၀ဲဝဲ တလည်လည် ပြန်မသွားရတော့ပဲ upgrade ဖြစ်လာတဲ့ နည်းပညာတွေကြား ကိုယ့်ကိုယ်ကို အမြန်ဆုံး update ပြန်လုပ်နိုင်လာမှာ သေချာတယ်လေ...။ တစ်ခါတစ်ခါ တစ်ခုခုဆို မသိ နားမလည်တာတွေများတော့ ဟိုး အခြေခံကို ပြန်ဆင်းကို လေ့လာနေရတာနဲ့ ရှေ့ဆက်ကို မတက်နိုင် ဖြစ်ဖြစ်နေရတာတွေ ရှိတယ်လေ..။
တခြား မေဂျာတွေ upload တင်ထားတာတော့ မတွေ့မိပါဖူး..။ Anyway, download ဆွဲကူပေးတဲ့ MTZO ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...။
Last edited by johnmoeeain; 10-02-2012 at 07:20 PM.
Welcome from အိပ်မက်ဆိပ်ကမ်း & DESIGN IDEOLOGY Reply With Quote The Following6Users Say Thank You to johnmoeeain For This Useful Post:
AndrewSway, January Gal, Maung Thant Zin Oo, tunaungkyaw, William Paul, ကိုထွန်း 03-09-2015 10:11 AM
Rep Power0ebook တွေ အကုန်လုံးလင့်တွေပျက်ကုန်ပြီထင်တယ် google drive, microsoft one drive, d-h.st စတဲ့ file sharing website တွေမှာပြန်တင်ပေးပါဦး ဒီ post တစ်ခုတည်းတင်မကဘူး http://www.myanmarengineer.org/forum...%B8-(%E1%81%81) http://www.myanmarengineer.org/forum...%B8-(%E1%81%82) တော်တော်များများ ပျက်ကုန်ပြီ ပြန်တင်ပေးပါဦး
Reply With Quote The Following User Says Thank You to kaungzan03 For This Useful Post:
William Paul 11-30-2016 10:58 PM
Phyo Htet Paing
Rep Power0Civil 1st Year to BE Course Work ဆိုပြီး နိုင်ငံခြားကျောင်းလျောက်ရာမှာ ပြန်တောင်းတာရှိပါတယ် အဲ့ဒါတွေပြင်ဆင်ရာမှာ အခတ်အခဲရှိနေလို့ပါ။ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ စီနီယာများရှိခဲရင်လမ်းညွှန်ပေးစေလို့ပါတယ်။ ဘယ်ပို့စ်မှာအကူအညီတောင်းရမှန်းမသိလို့ ဒီမှာပဲတောင်းလိုက်ပါတယ်။ 1st year to BE text book တွေကလဲဒေါင်းလို့မရတော့လို့ပါ ပြန်တင်ပေးစေချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
All times are GMT +6.5. The time now is 07:02 AM.